Tianjin Shengxin Sports Goods Co., Ltd hwagadzwa muna 2011, riri specialized mazano uye pakuvaka yemitambo yokuitira, uye mukugadzira panze gym midziyo, keji nhabvu munda, multi-chinangwa playground, schoolyard yemitambo midziyo, vachidzidzisa mano, basketball chemwenje, nevolleyball pambiru, nhabvu post, tenesi post, panze kudzivirira pajira riya uye bhandi voga. Tinogonawo kugadzira mhando dzose vasiri vomureza midziyo sezvo chikumbiro vatengi '. Zvino Shengxin yave nhengo China Sporting Goods Federation (CSGF), China Stationery & Sporting Goods Association (CSSGA), China Educational Equipment Industry Association (CEEIA), Tianjin Sporting Industry Association (Tsia), uye mutungamiriri chairema School Sporting Equipment Branch Association muna CEEIA uye Sporting Equipment Professional Committee iri Tsia. General Manager Zhang Junyuan akasarudzwa sezvo yakamira Kumutungamiriri Tsia.
Pashure pemakore 7 kusimukira, Shengxin Sports kwave kambani simba vari Chinese gym michina Industry. Zvino, kukwanisa uye fekitari nzvimbo iri yokutanga nzvimbo muna China. Kurimwa midziyo kushandisa michina iri kutungamirira pamwero iri indasitiri. Ikozvino tiri mumwe Top 10 makambani izvo kuwana NSCC chitupa uye kutungamirira dhigiri Tianjin. Pari, redu NSCC zvigadzirwa marudzi anopfuura 100 ari nechokumusoro kwerwizi dhigiri NSCC chitupa makambani pamusoro 40
Kukurumidza kukura zvemitambo nenhumbi indasitiri anopa mukana Shengxin Sports. rokutengesa edu mari muna 2017 kwave rmb mamiriyoni 100. boka redu vakaronga mhanyisa indasitiri marongerwo vatiitire zvigadzirwa dzinoti uye substantially kuwedzera okutengesa mari muna 2018-2020.
1.Level akakwidza kugadzirwa mutsetse, kugadzirwa nharaunda 20,000 mativi mamita. Vachikwanisa inogona kusvika 180,000 zvidimbu, goho ukoshi mamiriyoni 180 rmb.
2.New akavaka indoor gym midziyo kugadzirwa chirimwa anogona kusvika mamiriyoni 60 goho kukosha rokutanga gore.
3. mari mamiriyoni 3 rmb ose gore pamwe yepamusoro Taiwan RD chikwata kuti kukudziridza matsva akatevedzana indoor uye panze gym kugadzirwa, izvo zvakati kusimbisa wekambani mano pamasikiro, mukugadzira uye innovating.
4.Built chikwata basa pamusoro 20 vanhu pashure-rokutengesa kurega vakasununguka kubva distributers kubva kufunganya uye vatengi vachawanei.
5.Introduced renguva otomatiki-akabatana nhanhatu nomoto marobhoti anogona kuona 360 dhigirii nomoto pasina akafa angled uye otomatiki pakona. The kushandisa michina inogona kusvika 100%. Tinewo akatanga yepamusoro midziyo akafanana nedzimwe otomatiki achipfuura kaviri njanji spraying uye kupenda aibuda mutsetse, nhamba kudzora nyere nokuveza muchina, nhamba kudzora nenyere vachikotama muchina uye zvichingodaro. Pachena zvose izvi yepamusoro midziyo kuvandudza zvinhu yepamusoro uye kugadzirwa kunyatsoshanda uye kudzikisa kugadzirwa mutengo.
Zvino zvachose mubhizimisi wedu rmb miriyoni 125 (kwete kusanganisira nyika uye wekishopu chivakwa). The wakaiswa chiyamuro ndiyo mamiriyoni 60 rmb, guta guru Kuyerera mamiriyoni 65 rmb.
Mumakore akatevera, chokutanga, tinoda kukudziridza zvakangwara zvinhu kuburikidza kutsvakurudzwa kana kutaura. Kwete chete kugara unorema kutenga pamusika, asi kuwana kwomuzvarirwo vatengi dzinonakidza uye kupinda kwomuzvarirwo mhuri. Chechipiri, tinoda kubatana mune kugoverana upfumi kuti kwazvo uye zvikuru kuudza bhonasi National gym itsika. Tariro kusunda Internet, gore kadambari, mashoko makuru, Indaneti kuti chinhu uye National kugwinya kukura pamwe chete, regai mabikirwo ribatsire National kugwinya.
makore matatu edu varonga sezvo mvuto:
2018, okutengesa mari mamiriyoni 180 rmb, Tingawaneiko rmb mamiriyoni 30;
2019, okutengesa mari rmb mamiriyoni 300, Tingawaneiko rmb mamiriyoni 50;
2020, okutengesa mari 500 miriyoni rmb, Tingawaneiko rmb mamiriyoni 100.
Tichava ari kutungamirira pamwero pashure kuwana kubaya!
Muna September 2017, Shengxin Sports pamwe Tianjin Youfa Steel Pipe Group, inova rimwe "Top 500 Chinese Enterprises" kwemakore 12, kuvaka itsva Shengxin Sports pamwe. The pamwe anovandudza chekambani itsva fekitari kuvaka, itsva midziyo nhanganyaya zvigadzirwa zvitsva kukura.